Home Wararka Ururka Al Shabaab oo markii u horeeysay ka hadlay Doorashooyinka Soomaaliya
Ururka Al Shabaab oo markii u horeeysay ka hadlay Doorashooyinka Soomaaliya
Ururka Al Shabaab ayaa markii u horeeysay, in mudo ah, ka hadlay Doorashooyinka Soomaaliya ee la doonayo in lagu qabto dalka Soomaaliya. Amiirka Ururka Al-Shabaab Axmed Cumar ee loo yaqaano Abu Cubeyda ayaa cod uu iska soo duubay oo lagu soo aadiyay munaasabadda ciidda Carafo, taas oo lagu baahiyay warbaahinta ku hadasha magaca Al Shabaab uga hadlay doorashooyinka la filayo inay dalka Soomaaliya ka dhacaan.
Amiirka Abu Cubeydah oo ka hadlay khilaafkii ka dhashay doorashooyinka Soomaaliya, ee markii dambe keenay in lagu xaliyo xerada Afisyoone, taasi oo uu ku macneeyey inay ka tarjumeyso sida “shisheeyaha ay dalka u haystaan iyo in amarradooda lagu maamulo.”
AL Shabaab oo wado qorsho ay doonayso in ay saameyn ugu yeelato arimaha Doorashooyinka, ayaa Amiirku waxa uu madaxda dalka hadda hoogamisa iyo musharaxiinta madaxweyne ku sheegay in ay yihiin kuwa adeegga shisheeye, oo aan xor aheyn, isaga oo su’aal ka keenay sida dad noocaas ah looga sugi karo inay dalka samata bixiyaan, sida uu hadalka u dhigay.
“culumaa’u suuq faasidiin ah oo diintooda ka leexday, islamarkaana sharciyaaya nidaam aan ku saleysneyn diinta Islaamka, oo ay xalaaleeya xumaanta ay ku jiraan madaxda dowladda federaalka, kuna raacay madaxdaasi in dalka lagu xukumo wax aan ahayn kitaabka Allah.” Ayuu Yiri Abu Cubeyda
Abu Cubeydah ayaa sidoo kale waxa uu weerar ku qaaday ciidamada Soomaaliya iyo warbaahinta Soomaalida, isaga oo sheegay in warbaahinta ay u adeegaan faafinta iyo qurxinta nidaamka dimqoraadiga ah, oo xaqiiqda ay qariyaan, sida uu hadalka u dhigay. Amiirka Al-Shabaab ayaa uga digay shacabka iyo ergooyinka inay ka qeyb-galaan doorashooyinka dalka ka dhacaya.